Kukhona amaholide amaningi emhlabeni: kumnandi, okubuhlungu, okomuntu siqu, kwezingane. Kodwa kukhona isigaba - ewusizo futhi edingekayo! Enye enjalo yiSuku Lwaziswa Lomhlaba.
Ukuze ufunde okuthile okusha, okuthakazelisayo, nothando olungavamile konke. Manje zonke izindlela zivulekile lokhu. Ngokufika kwe-intanethi, ungafunda ngemizuzwana ukuthi kwenzekani noma kuphi emhlabeni. Kodwa inani lamabhuku nezinhlamvu azizange zihlupheke ngalokhu. Abantu bayaqhubeka bevakashela amareyibrari, bajabula ngokuya emihlanganweni eqhutshwa khona. Phela, umtapo wolwazi ungumthombo wolwazi oludingekile nedatha ewusizo! Ngakho-ke, usuku lomhlaba jikelele wolwazi emtatsheni wezincwadi ngumcimbi omkhulu. Bayilungiselela kusengaphambili, ngakho-ke uzovakashela lesi senzo!
Yini? Kuphi? Kungani?
Ukwazi konke okusemhlabeni akunakwenzeka, kodwa kubalulekile ukulwela lokhu. Kusukela ekuzalweni, ubuchopho bethu bathole ulwazi oluhlukahlukene olugcinwe enkumbulweni iminyaka eminingi. Kodwa inqolobane igcwaliswa nsuku zonke, futhi ayikho isiphelo kuso.
Ngo-1992, ngokokuqala ngqa, i-International Informatization Forum yavulwa. Lesi senzakalo esimangalisayo senzeke ngoNovemba 26. Eminyakeni emibili kamuva, i-International Informatization Academy yaveza umqondo wokwakha iholidi elikhethekile elizinikezele indima ebalulekile yolwazi empilweni yesintu. Iziphathimandla eziphakeme nezinhlangano zomphakathi zisekela ngokuzithandela lesi sinqumo. Kusukela ngo-1994, usuku lwama-26 lukaNovemba lwaziwa ngokuthi yi-World Information Day. Kusukela ngalesi sikhathi, imicimbi ehloniphekile, amaforamu, amakhomithi aqhutshwa minyaka yonke ezindaweni eziningi. Abantu baxoxisana nokubaluleka kolwazi, ukulawula nokucubungula, ukudluliselwa okungenakulinganiswa.
Cishe yonke imindeni yesibili kuleli zwe ijabulela i-intanethi. Abantu basebenzisa lolu dudu - ngokuchofoza okukodwa ungathola noma yiluphi ulwazi. Intsha iyichitha isikhathi esiningi ekuxhumaneni nomphakathi, kumaforamu. Lapho, esikhundleni sokuthola ulwazi olunokwethenjelwa, ungabona ukungcola okuningi nokuhleba. Ngakho-ke, izenzakalo zeSuku Lwaziswa Lomhlaba zihlukahlukene. Umsebenzi wabo ukufundisa abantu ukuba babe nolwazi, ukuhlukanisa amanga ngeqiniso, ukuphatha imibiko yemidiya ngokuthula, ngokuthembeka. Ngemuva kwalokho, kusukela ekugqibeleni kolwazi olugeleza ungathola ukucindezeleka, isifo sengqondo. Intsha ivame ukubhekana nokulutha kwekhompyutha, idlala imidlalo yosuku lokulala nokuhlwa, ukukhohlwa ukuthi yiqiniso.
Manje uyazi ukuthi iSuku Lolwazi Lomhlaba ligujwa nini. Qiniseka ukuthi uya emihlanganweni nemicimbi. Lapho ungathola ulwazi oluningi oluwusizo.
Funda ezweni lethu izigidi zabantu. Kodwa akuwona wonke umuntu manje onethuba lokuqoqa umtapo wolwazi wasekhaya, uyishiye enzalweni yabo. Ngakho-ke, amaphephandaba encwadi yomphakathi adumile. Zigcwaliswa nezincwadi zanamuhla namamagazini, zikhona izenzakalo zanamuhla nezitolo ezihamba phambili. Futhi uma umtapo wolwazi engumnikazi nomuntu nomsebenzi wakhe, kukhona okuthakazelisayo kakhulu, ikakhulukazi ngosuku lwe-World Information. Iskripthi sihlelwe ngokucophelela, ukulungiswa kuhamba ngokugcwele. Ungabandakanya izingane futhi ubonise ukudlala okuncane kule sihloko. Noma nje ukujwayela izivakashi ngemikhiqizo emisha. Ungakwazi ukubola izincwadi ngesihloko noma nge-alfabhethi. Futhi kuyoba mnandi nakakhulu uma uhlela ibhodlela lencwadi. Phela, bonke bajwayele lokho emtatsheni wezincwadi lezi zisezintabeni ezihle. Futhi ngalolu suku, ungamema izivakashi ukuba zihlukanise ngokuzenzekelayo idamu futhi zifunde ulwazi oludingayo. Umtapo wolwazi uzokutshela ngawo wonke amashaveli enyangeni noma ngonyaka, uzokunikeza isimemezelo esifushane kumabhuku ngamunye. Kuyoba umcimbi ongavamile kwiSuku Lwaziswa Lomhlaba.
Isizathu - isikhathi, ibhuku - ihora
Funda futhi ubeke isisekelo solwazi oludingayo njalo. Ikakhulukazi, kuyasiza ezinganeni. Lapho befunda kabanzi manje, besazi ukuthi ikusasa labo lizocaca kangakanani. Phela, ezweni lanamuhla, ukuba yiziphukuphuku futhi kungafundile kungenakulungiswa futhi akudingeki. Kulokhu, ama-anecdotes mayelana nama-blondes ayasiza kakhulu. Abaningi bazocabangela ukuthi kufanele yini ukuba njengabo.
Abancane bayabuza kakhulu, bathathe isikhathi sokuphendula yonke imibuzo yabo. Kuncike ekufundweni kwesikole nakothisha. Othisha kumele banikeze ulwazi hhayi ekilasini kuphela, kodwa futhi bahambise ihora lesiklasi lesithakazelisayo . Usuku Lomniningwane Wezwe Luyisikhathi esihle kakhulu salokhu. Izingane zidinga ukuchaza ukuthi kubaluleke kangakanani ukwazi okuningi ukuthi ukuqonda kahle kanjani lokhu noma lolo lwazi. Uthisha unesibopho sokuqhuba izingxoxo ezivamile nesizukulwane esincane, ukuzama ukufakazela kubo ukuthi ngaphezu kwemidlalo yevidiyo kunezinye izinto eziningi zokuzijabulisa eziwusizo
Eklasini ihora, buza ingane ngayiphi indlela yokuthola ulwazi iyatholakala kakhulu futhi iyaqondakala kuye. Ungase uzwe izimpendulo eziningi ezimangalisa futhi ezingalindelekile.
Akuwona wonke umuntu owaziyo ukuthi kuneholide elinjalo - Usuku Lwaziswa Lomhlaba! Fundisa umndeni wakho nabangane, mhlawumbe kuzoba yinye yezinsuku zabo ezizithandayo zonyaka. Lungiselela ikhadi lokubingelela noma unikeze konke ngomlomo.
Isibonelo, ungakwazi ukuhalalisela izihlobo zakho ngale nkondlo enhle:
Sigubha usuku lolwazi lomhlaba namuhla!
Futhi sibonga kuye kuphela, siyazi konke okusezweni.
Futhi uma into esingayiqondi, khona-ke sizoyithatha le ncwadi kusuka eshalofini.
Kunolwazi oluningi kulo: lubhaliwe lunomusa futhi luhlakaniphile.
Noma bheka i-Intanethi, futhi uzosinika impendulo esheshayo,
Into esemqoka ukuthi wonke umuntu abe nesithakazelo,
Esikhathini sofa, ungakhathazeki ngokulala phansi!
Kulolu suku lwolwazi, silwe nobuvila bakho,
Funda izincwadi eziningana, khanyisa ngengqondo!
Lokhu kuyathokozisa yonke indawo, okungahle kuvezwe ngesimo somlomo, esibhaliwe ne-elekthronikhi.
Gubha wonke amaholide, ngoba ngamunye wabo unolwazi oluthile oludingekayo. Thuthukisa izingane futhi ungabeki ngemuva kwazo. Yabelana nabantu ngalokho owaziyo ngokwakho, ngoba akekho ulwazi olungenakuqhathaniswa. Ukudlulisa ulwazi manje akuyona inkinga: ngamazwi, ngokubhala, ngosizo lwezimpawu, amagagasi omsakazo nobuchwepheshe. Funda amabhuku, ubukele i-TV, ulalele umsakazo bese uxoxisana nabangani ngolwazi olutholiwe. Ngempela, akukho lutho olungcono kunokukhulumisana okuphilayo, le mizwelo ayihlaziyi!